အားလပ်ရက်များအပြီးတွင်အလုပ်ပြန်လုပ်ခြင်းသည်ခက်ခဲနိုင်သည်၊ သို့သော်သင်အမြဲတမ်းအရာဝတ္ထုများ၏တောက်ပသောမျက်နှာကိုကြည့်ရန်ကြိုးစားရမည်။ ဤရွေ့ကား, အမှု၌တည်၏ စက်တင်ဘာလနှင့်အောက်တိုဘာလများတွင်စီးရီးပြန်လည်ပတ်မှုအသစ်များ၏အိမ်ရှင်အဖြစ်လက်ခံကျင်းပသည်.
နွေရာသီသည်ကျွန်ုပ်တို့ကိုမမေ့နိုင်သော 'The Leftovers' နှင့်ယနေ့ခေတ်အထိအရှိဆုံးအံ့သြဖွယ်ရာသီ 'Game of Thrones' နှင့်အတူစွန့်ခွာသွားပါကဆောင်း ဦး ရာသီနောက်ကျလိမ့်မည်မဟုတ်ပါ။ 'American Horror Story', 'Gotham' နှင့် 'The Walking Dead' တို့သည်အနည်းငယ်မျှသာဖြစ်သည် လုပ်ရိုးလုပ်စဉ်သို့ပြန်သွားသည်ကိုပိုပြီးခံနိုင်ရည်ရှိစေမည့်ရာသီဖြစ်သည်.
အားလပ်ရက်များအပြီးတွင် 'Narcos' နှင့် 'American Horror Story: Cult' တို့သည်ရေခဲကိုချိုးဖဲ့ရန်တာဝန်ရှိသည်။ Ryan Murphy ၏ကြောက်မက်ဖွယ်ဗေဒင်အယူအဆသည်စက်တင်ဘာ ၅ ရက်တွင်ကြာမြင့်စွာစောင့်မျှော်ခဲ့ရသောခုနစ်ရာသီနှင့် Netflix စီးရီးသည်စက်တင်ဘာ ၁ ရက်တွင်တတိယရာသီနှင့်အတူပြန်လာမည်ဖြစ်သည်။ 'Outlander' (စက်တင်ဘာ ၁၀)၊ 'Big Bang သီအိုရီ' (စက်တင်ဘာ ၂၅)၊ 'သေစေလောက်သည့်လက်နက်' (စက်တင်ဘာ ၂၆)၊ 'The Blacklist' (စက်တင်ဘာ ၂၇) နှင့် 'Gotham' (စက်တင်ဘာ ၂၈) သည်အခြားလူကြိုက်များသည့်စီးရီးများဖြစ်သည်။ ယခုနှစ်နဝမလအတွက် Premiere ရာသီ။
အောက်တိုဘာလတွင်ရုပ်မြင်သံကြားရှေ့တွင်ကျွန်ုပ်တို့အတွက်သီးသန့်နာရီများနှင့်နာရီများစွာရှိသည်။ အောက်တိုဘာ ၁ ရက်နေ့တွင် The Simpsons အမည်ရှိမျက်နှာပြင်ငယ်ပေါ်ရှိသက်တမ်းအရင့်ဆုံးဇာတ်ကားတစ်ကားဖြစ်သည်။ Lucifer ကိုတတိယရာသီအောက်တိုဘာ ၂ ရက်တွင်သတ်မှတ်ထားသည်။ '' ၏တတိယရာသီ စက်ရုပ်ကို ၁၁ ကြိမ်မြောက်ရုံတင်ပြသသည်။
'Walking Dead' နှင့် 'Stranger Things' တို့၏ဖြစ်စဉ်သစ်များကိုကြည့်ရှုရန်အောက်တိုဘာလကုန်အထိစောင့်ဆိုင်းရမည်အရာအားလုံးကအကျိုးရှိလိမ့်မည်ဟုဖော်ပြသည်ပေမယ့်။ အောက်တိုဘာ ၂၂ ရက်တွင်ရက်စက်သော Negan (ဂျက်ဖရီဒင်းမော်ဂန်) ဦး ဆောင်သောအသက်ရှင်ကျန်ရစ်သူများနှင့်ကယ်တင်ရှင်များအကြားပြင်းထန်သောထိပ်တိုက်တွေ့မှုမည်သို့ဆက်လက်တည်ရှိသည်ကိုကျွန်ုပ်တို့တွေ့မြင်နိုင်သည်။ ယေဘုယျအားဖြင့်ကောင်းမွန်သောစီးရီးများ ၈၀ နှင့်လူကြိုက်များသူများသည်လွန်ခဲ့သောလအနည်းငယ်ကသူတို့၏ပြက္ခဒိန်များ၌ 'Stranger Things' မှယောက်ျားများသည်ကမ္ဘာကြီးကိုနောက်တဖန်လှည့်ပြန်စေလိမ့်မည်။
Netflix ကဖြန့်ချိမည့်ရက်ကိုကြေညာရန်မရှိသေးသော်လည်း “ Black Mirror” ၏ပဉ္စမရာသီသည်အောက်တိုဘာလတွင်စင်မြင့်ပေါ်သို့ရောက်ရှိလိမ့်မည်ဟုကောလဟာလသတင်းများထွက်ပေါ်နေသည်ပြီးခဲ့သည့်အတိုင်းဖြစ်ပျက်သကဲ့သို့
ဆောင်းပါး၏လမ်းကြောင်းအပြည့်အစုံ - စတိုင်လ်အမျိုးသားများ » လူနေမှုပုံစံစတဲ့ » အချိန်အား » နောက်ကျောကိုပိုပြီးခံနိုင်ရည်အလုပ်လုပ်ပြန်စေလိမ့်မည်ဟုစီးရီးပြန်လာ